Izikhangiso zevidiyo yamaselula zimayelana nodaba ngaphandle kokuthengiswa | Martech Zone
I-Google nje ukhiphe imiphumela yocwaningo olusha lokho kuhlaba umxhwele impela futhi kufanele kubukwe yinoma ngubani ofuna ukwandisa ukufinyelela kwayo kwevidiyo kudivayisi ephathekayo. Kalula nje, imodeli yokukhangisa ebusweni bakho ayisebenzi nje kuselula yethu.
Ukusebenza ne-Mountain Dew, BBDO yakhiqiza amavidiyo amathathu ahlukene. Okokuqala bekufaka isikhangiso sethelevishini kuselula. Owesibili ubephonsa ukubekwa kwezikhangiso ngokushesha kubabukeli beselula abazophuma. Ividiyo yesithathu ayiwucindezelanga umkhiqizo, kodwa indaba, okuholele ku- U-26% wababukeli beselula ubuke ividiyo futhi ngaphezu kwengxenye yabo bekhumbula umkhiqizo.
Uma lokhu kungabonakali kumangalisa… khumbula ukuthi isivivinyo sesithathu Imizuzwana engama-30 ubude kunabanye ababili!
Kutholwe Amathuba Amathathu Ngesilingo
Okungalindelekile kungaba namandla. Abantu bazohlala nawe.
Thatha isikhathi sendaba yakho. Ungagcini ngokungena kumkhiqizo wakho ngaphambi kokuba weqe.
Akudingi ukubukeka njengesikhangiso ukuhambisa umkhiqizo wakho.
“Okwangempela” kusebenze njengokulawula ekuhlolweni kwe-Google. Yindawo yamasekhondi angama-30 okudlala kuyo abafana abathathu abathatha iMountain Dew Kickstart, baqale ukudansa, nayo yonke into esendlini engaphansi — kusuka esihlalweni esigcwele ngokweqile kuya enjeni — kuyangena. Bese abafana sebephumela kunoma yini elandelayo.
Le recut yesikhangiso semizuzwana engu-31 iqala ngokudutshulwa komkhiqizo omkhulu, onesibindi nokubala phansi, okukhombisa ukuthi okuthile okupholile sekuzokwenzeka. Ababukeli bese befakwa phakathi kwesenzo futhi indaba iqala lapho.
I-recut ye- "Pure Fun" iphonsa ababukeli maphakathi nesenzo ngaphandle komculo noma umqondo wangempela ngokwenzekayo. Ngemuva kwalokho umculo uyangena bese isikhangiso sikhombisa izinto ezahlukahlukene zokudansa. Yinde kakhulu kunezikhangiso ezimbili zokuqala ngeminithi eli-1, imizuzwana engama-33.
Tags: bbdoizikhangiso ze-googleGoogle +izikhangiso zamavidiyo weselulaukukhangisa ngevidiyo ephathekayoamazolo ezintaba